CEIA သမိုင်း | AndamanCEIA
Cross-Ethnic Integration in Andaman
သတင်း (၁) အန်ဒါမန်လူမျိုးစုဆက်နွယ်မှုစီမံကိန်းဖြစ်ပေါ်လာပုံ
သက္ကရာဇ် 2551-2553 ခုနှစ်များတွင် အန်ဒါမန်လူမျိုးစုဆက်နွယ်မှုစီမံကိန်းအား စထီယံကိုစေ့(က်)နာခပ ရထီ(ပ်)ဖောင်ဒေးရှင်း၏လက်အောက်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ မိမိတို့စီမံကိန်းအား တည်ထောင် ရသောအကြောင်းရင်းမှာ 2547 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 26 ရက်နေ့၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော စူနာမိသဘာဝဘေးဒဏ် ကြောင့် အကြီးကျယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီး ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရသော ထိုင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအပြင် ၎င်း ဒေသအတွင်း လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများစွာပါဝင်ခဲ့သည့်ကြောင့် ပင်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများသည် စူနာမိလှိုင်းဒဏ်ကြောင့် ၎င်းတို့၏ဘ၀များစွာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့ပါ များစွာထိခိုက်ခဲ့တာ အထင်ရှားဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ထိုအပြင် ထိုင်းလူနေမှုပတ်ဝန်းကျင် နှင့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတို့၏နေထိုင်မှုသည် ချောမွေ့ခြင်းမရှိတဲ့ပြဿနာများလည်း ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ ပါသည်။ 2551-2553 ခုနှစ်အတွင်း ၃ နှစ်တာကာလ၌ အန်ဒါမန်လူမျိုးစုဆက်နွယ်မှုစီမံကိန်းမှ စီမံကိန်း များစွာဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် ထိုင်းလူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားကြား နားလည်မှု ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်သွားနိုင်ရေးအတွက်လည်း တစ်ခုပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ မိမိတို့စီမံကိန်းတွင် လူငယ်အုပ်စု အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ယဉ်ကျေးမှု နှစ်ခုကြား နား လည်မှုများပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ လူငယ်များနှင့် ကလေးငယ်များထိုင်းဘာသာသင်ယူခြင်းဖြင့် ထိုင်းပညာရေး ဥပဒေအရ မြန်မာကလေးများထိုင်းပညာရေးသင်ယူနိုင်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ထို့အပြင် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားအတွက် ထိုင်းလူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဥပဒေတို့ကိုပိုမိုနားလည်လာနိုင်ရန် လူထုအခြခံခေါင်း ဆောင်များသင်တန်းပေးခြင်း၊ သင်တန်းမှရရှိလာသောအတွေ့ကြုံများအား မိမိတို့နေ့ဓဒူဝရင်ဆိုင် ကျော် ဖြတ်ရသော ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုကြား ပြန်လည်အသုံးချနိုင်စေရန် နှင့် မိမိမြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားအုပ်စုများအတွက် အထွေထွေလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန် မတည်ငွေထောက်ပံ့မှုစီမံကိန်းတွေ လည်း ယနေ့ထိတိုင်ပံ့ပိုးလျက်ရှိပါသည်။
မိမိတို့၏3နှစ်တာကာလ အန်ဒါမန်လူမျိုးစုဆက်နွယ်မှုစီမံကိန်းသည် လူမျိုးနွယ်တိုင်းအတွက် ငြိမ်းချမ်း ရေးတည်ဆောက်ခြင်း နှင့် ငြိမ်းချစ်စွာနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် အထူးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ အန်ဒါမန်လူမျိုး စုဆက်နွယ်မှု စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်သည် လုပ်ငန်းစဉ်များရှေ့ဆက်၍ တည်တံ့စေပြီးလျှင် ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းဒေသရှိလူထု၊ ဒေသခံအုပ်ချုပ်အဖွဲ့၊ အစိုးရပညာရေးဌာနများနဲ့ပိုမိုပူးပေါင်းကာ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ၏ လူနေမှုဘ၀မြှင့်တင်ခြင်း၊ ထိုင်းလူထုနှင့်သဟဇာတ ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ပြဿနာများပိုမိုကိုင်တွယ်နိုင်စေရန် ဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ထိုင်းနှင့်မြန်မာလူနေမှုဘ၀ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသွားခြင်းနှင့် အခက်ခဲများဖြေရှင်းသွားရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အား ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ ပြဿနာများကိုကောင်းမွန်စွာနားလည်စေခြင်း နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်
ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့အား ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အကူများပေးခြင်း၊ ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့မှ လည်း မိမိတို့ဒေသအတွင်းရှိ ထိုင်းလူထုနှင့်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအား ဥပဒေဆိုင်ရာအကူ အညီများ ရေရှည်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
လူထုအခြခံအဖွဲ့များနှင့်ပူးပေါင်း၍ ဒေသအတွင်းရှိထိုင်းလူထုနှင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား များလက် တွဲကာ အနာဂတ်မိမိကိုယ်မိမိမှီခိုအားကိုးနိုင်ရေးအတွက် တည်တံ့ခိုင်မာသောလူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်ဖြစ်စေရန် ထောက်ပံ့ငွေများ မတည်ပေးခြင်း။
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးရုံး၌ တရားဥပဒေနှင့်ဆိုင်သောခုံရုံးငယ်လေးဖွင့်ထားပြီး ထိုင်းလူမှုအသိုင်း အ၀ိုင်းအတွင်း လူနေမှုပြဿနာလျော့ပါးသွားစေရန်အတွက်ရည်ရွယ်ကာ အလုပ်ရှင်များ၊ ထိုင်းလူ ထုနှင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ် သမားများသည် ဥပဒေ နှင့် ဥပဒေအခွင့်အရေးများ လာရောက်တိုင်ပင် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း။
ထိုင်းနိုင်ငံသားရော ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများပါနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဥပဒေရုံးငယ်လေး နှင့် အရေးပေါ်ဖုန်းလိုင်း (hot line) စီစဉ်ထားပြီး ထိုင်းလူမျိုးများ၊ အလုပ်ရှင်များနှင့် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအတွက် တရားဥပဒေဆိုင်ရာ၊ အလုပ်သမားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် အခွင့် အရေးဆိုင်ရာ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ၊ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင် စီစစ်ရေးဆိုင်ရာ နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူများကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း။
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအား အလုပ်သမားဥပဒေဆိုင်ရာစေတနာ့ဝန်ထမ်းသင်တန်း များပြုလုပ် ပေးပြီး ၎င်းစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအား ထိုင်းလူထုနှင့်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်များလို အပ်သေ အကူအညီ များဆောင်ရွက် ပေးရန်၊ ထိုင်းလူနေမှုအကြောင်းကို ရွှေ့ပြောင်းအလုပ် သမားများနားလည်လာစေ ပြီး ထိုင်းလူမျိုးများနှင့်သဟဇာတဖြစ်စွာ နေထိုင်နိုင်စေရန်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
အလုပ်ရှင်းများနှင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကြား ကောင်းမွန်သောနားလည်မှုဖြစ်ပေါ်စေရန် ဤစီမံ ကိန်းမှ အလုပ်ရှင်းများဖြစ်သော ထိုင်းလူမျိုးများနှင့် အလုပ်သမားများဖြစ်သော ရွှေ့ပြောင်းအလုပ် သမားများကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြကာ အဂတိလိုက်စားမှုလျော့နည်းစေရန်နှင့် ကောင်းမွန်သော အတွေးအခေါ်များထားရှိစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်သည်။ ဤကဲ့သို့အခွင့်အရေးရခိုက် နှစ်ဖက်သော လူထုအတွက် ကောင်းမွန်သောနားလည် မှုနှင့်ငြိမ်းချမ်းသောနည်းဖြင့် အတူနေထိုင်သွားနိုင်စေခြင်းမှာ –
ပေါ်လစီ (မူဝါဒ) များလိုက်နာရာတွင် ဟာကွက်များလျော့နည်းစေခြင်း၊ မှန်ကန်စွာလိုက်နာ စေခြင်း။
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာသင်တန်းများပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ထို့ အတူ အစိုးရလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များမှလည်း ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေများ ပိုမိုနားလည်းနိုင်စေခြင်းနှင့် လိုက်နာ လေးစားနိုင်စေခြင်းအပြင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအပေါ် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများပပျောက် သွားစေရန် လိုက်နာစေခြင်း။
ထိုင်းလူထုခေါင်းဆောင်များနှင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားခေါင်းဆောင်းများ သင်တန်းအတူပြု လုပ်ပေးခြင်း၊ ၎င်းလူထုနှစ်ရပ်ကြား နားလည်မှုများပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုပိုင်းဆိုင်ရာ များ အတူတကွလက်တွဲပူးပေါင်းမှုအားကောင်းစေခြင်း၊ မိမိတို့လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်း စီမံ ကိန်းငယ်လေးများအား အတူတကွဝိုင်းဝန်းအကြံပေး၊ ဆောင်ရွက်နိုင်စေခြင်း။
ထိုင်းလူထုနှင့်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများပူးပေါင်း၍ လူထုပတ်ဝန်းကျင်၌ဖြစ် ပေါ်လာသောစီမံ ကိန်းငယ်များအတွက် ထောက်ပံ့ငွေပေးခြင်း။
ထိုင်းနှင့်မြန်မာတို့၏အရှေ့တိုင်းယဉ်ကျေးမှုနီးစပ်သောကြောင့် ထိုင်းနှင့်ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာအလုပ် သမားများအတွက် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပွဲများ၊ သာသနာ့နေ့ကြီးရက်ကြီးများအတူပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်မှုအတွက် ပံ့ပိုးပေးခြင်း။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် 2558 ခုနှစ်တွင် အာစီယံနိုင်ငံဝင်ရန်အတွက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏လွတ်လပ်စွာ ရွှေ့ပြောင်း သွားလာခွင့်များအား ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမည့် အဓိကအချက်များမှာ –
အလုပ်ရှင်များအား လွတ်လပ်သောရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအကြောင်းပိုမိုနားလည်နိုင်စေရန် နှင့် အာစီယံနိုင်ငံဝင်အဖြစ် ကြိုဆိုရန်သင်တန်းပေးခြင်း။
အာစီယံနိုင်ငံဝင်များအကြောင်းအား အလုပ်ရှင်များနှင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ပိုမိုနားလည်မှု ရှိစေရန် သင်တန်းပေးခြင်း။
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအသင်းအဖွဲ့များဖြစ်ပေါ်လာပြီး အခြားသောအလုပ်သမားများအား လည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက် သင်တန်းပေးခြင်း။
စထီယံကိုစေ့ (က်)နာခပရထီ(ပ်) ဖောင်ဒေးရှင်းသည် အဖွဲ့အစည်း (သို့) လူထုအကျိုးပြုဌာန ဖြစ်သည့်အပြင် နိုင်ငံအစိုးရ၏ ဘဏ္ဍာရေးဌာနမှ အသိမှတ်ပြုခံအဖွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်သည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းသည် တိုးတက် ဖြိုးဖွံ့မှုကြီးထွားသည့်အပြင် စီမံကိန်းများပုံသေရေးဆွဲထားခြင်းမရှိပဲ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်း၏ လိုအပ်ချက်များ နှင့်အညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ၍ဆောင်ရွက်မှုများလည်း အစဉ်တစိုက်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ ဤအဖွဲ့အစည်း အားတည်ထောင်ရာတွင်ပါဝင်ခဲ့သောသူများအနက် အာကျန်စုလတ် စီယူရက်(က်)၏အဆိုအရ အဖွဲ့အစည်း ဆိုသည်မှာ ပုံသေနေရာတကျတည်နေရန်မဟုတ်ပဲ ရွေ့ပြောင်းရန်၊ တိုးချဲ့ရန်လိုအပ်ပါက ဆောင်ရွက်ရမည် သာဖြစ်သည်။ အကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဆုံးလုပ်ငန်းမှာ လိုအပ်ချက်များမပြည့်ဝသေးသော အဆိုတော်များနှင့် စာရေးများကိုသာ အကူအညီပေးခြင်းသာဖြစ်ဟု ဆိုသည်။ ထို့နောက် မိမိတို့ရည်မှန်းချက်များ တဆင့် ပြီးတဆင့်တို့ချဲ့ကာ ယဉ်ကျေးမှု၊ သာသနာနှင့် ငြိမ်းချမ်းသောနည်းလမ်းများဖြင့် အာဏာအသုံးချသူများနှင့် အဓမ္မပြုကျင့်သူများအား ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ခဲ့ပါသည်။ မိမိတို့၏ရည်မှန်းချက်သည် ငြိမ်းချမ်းပြီး တရားမျှတ သောလူမှုအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ရေးအတွက် အဖွဲ့အစည်းတခုခုအားမှီကာ လွတ်လပ်မှု၊ လူ့အခွင့်အရေးများအပြည့်အ၀ရရှိနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဖွဲ့အစည်း၏အဓိကရညရွယ်ချက်မှာ လူမှုအဆင့်အတန်းတိုင်းအတွက် အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေရန် လူထုခေါင်း ဆောင်များမွေးထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိတို့၏အတိတ်လုပ်ငန်းစဉ်များအားပြန်သုံးသပ်လျှင် စထီယံကိုစေ့ (က်)နာခပရထီ(ပ်) ဖောင်ဒေးရှင်း၏လက်အောက်မှ အသင်းအဖွဲ့ငယ်လေးများ အောင်မြင်စွာ မွေးထုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အသင်းအဖွဲ့တိုင်းသည် လွတ်လပ်စွာလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် နိုင်ခဲ့ကြသည့်အပြင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ၌လည်း တည်တံ့ခိုင်ခန့်စွာတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်း တို့၏တာဝန်မှာ ဆင်းရဲသောလူထုနှင့် နယ်စွန်နယ်ဖျားလူထုကို အထူးအကူအညီပေးရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ အပြင် ထိုင်းနိုင်ငံ၏လူမှုကူညီရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သော ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာပိုင်းဆိုင်လုပ်ငန်းများ နှင့် ၎င်းတို့နှင့်ဆက်နွယ်သောလိုအပ်ချက်များ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာနှင့် ဗုဒ္ဓသာသနာရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုဖူလုံ ရေးဆိုင်ရာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ၊ ငြိမ်းချမ်းသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အခြားသောအများအကျိုးခံစားခွင့်ရစေမည့်လုပ်ငန်းများကိုပါပူးပေါင်း ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ပါ သည်။ မိမိတို့၏လုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်းကိုလည်း ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံခြားသို့ သတင်းအချက်အလက် များပြန့်နှံ့သွားစေပြီး နိုင်ငံရးနှင့်ပတ်သက်မှုမရှိသောကြောင့် အခြားသောလူထုအကျိုးပြုအဖွဲ့အစည်းများ ကလည်း မိမိတို့လုပ်ငန်းများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
ဖန်ငခရိုင်အတွင်းရှိ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းလာခြင်းမှာ အန်ဒါမန်လူ မျိုးစုဆက်နွယ်မှုစီမံကိန်းအဖွဲ့နှင့် အခြားသောအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ (NGO) နှင့်ပူးပေါင်းမှု အားကောင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။4နှစ်တာကလအတွင်း မိမိတို့၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် ဖန်ငခရိုင် “ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအသင်း” (သို့) PCC (Phang nga CBO Center) အား ဇွန်လ၊ 2555 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအသင်းသည် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက်များစွာ အထောက်အကူဖြစ်စေသည့်အပြင် အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရဌာနများနှင့် ထိုင်းလူထုအားအဆက်အသွယ် လုပ်သည့်အခါမှာလည်း လွယ်ကူစေနိုင်သည်။ PCC အသင်းကြီးတွင် ဖန်ငခရိုင်ရှိ မြို့နယ်အသီးသီးမှ လူထုအခြေခံအသင်းငယ်လေးများ (CBO)9သင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ထို့အပြင် PCC သည် 2555 ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ 27 ရက်နေ့တွင် ၎င်းအသင်းငယ်များနှင့်အစည်းအဝေးခေါ်၍ အသင်း၏ ကော်မတီ တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါသည်။ အသင်းကော်မတီသည် ဒေသအတွင်း ပြုလုပ်လေ့ရှိသော နေ့ကြီးရက်ကြီးလှုပ် ရှားမှုများဖြစ်သော ထိုင်းနိုင်ငံဖခင်များနေ့၊ လွိုင်ကရထုံနေ့နှင့် နိုင်ငံတကာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနေ့ အခမ်းအနား တို့အား 2555 နှစ်မကုန်မီ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။
PCC ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းမှာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ မိမိတို့အခက်အခဲများကို မိမိတို့ဘာသာ ကိုင် တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး ထိုင်းလူထုအတွက်တာဝန်ပိုတစ်ခုမဖြစ်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ စုပေါင်းခြင်းသည် ထိုင်းလူထုအတွက်ရော မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေ သည်။ သူတို့တတွေအတူတကွ ပူးပေါင်းပြီးဖြေရှင်းကြလျှင် အခက်အခဲပြဿနာများသည် တဆင့်ပြီး တဆင့် လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။ အသင်း၏ကော်မတီနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပေါ်မူတည်ပြီး ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများ ထိုင်းအစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာဌာနများ နှင့်ဆက်သွယ်ရာ၌ အရည်အချင်းတိုးတက်လာ စေခြင်း၊ အလုပ်သမားများနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များ မြန်ဆန်စွာဖြန့်ဝေနိုင်စေခြင်း၊ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားထုကြား သတင်းအချက်အလက်တွေများများရောက်လာလေလေ ထိုင်းလူ နေမှုဘ၀အကြောင်းကို ၎င်းတို့ပိုမိုနားလည်လာလေလေဖြစ်၍ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လူနေမှုဘ၀ပိုမို ပြေလည်လာ နိုင်စေခြင်းဖြစ်သည်။
အန်ဒါမန်လူမျိုးစုဆက်နွယ်မှုစီမံကိန်း၏ တရားဥပဒေနှင့်ဆိုင်သောခုံရုံးငယ်လေးသည် 2555 ခုနှစ်၊ ဇွန်လ5ရက်နေ့က စတင်ကာ ရက်(က်)ထိုင်းဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့အတူပူးတွဲ၍ ခနွမ်မြို့နယ်တွင် နေ့စဉ်လဆန်း 14 ရက်မှ လဆုတ်2ရက်နေ့ အထိဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ လပြည့်နေ့မတိုင်မီ လှေသားများဆိပ်ကမ်းသို့ပြန်ဝင်လာ ကြ၍ မြန်မာ၊ လာအို နှင့် ကမ်ပူးချားလှေသားများအတွက် 3-4 ရက်အထိနားခွင့်ရကြသည်။ ထိုအခါ လှေစီးအရေအတွက်မှာ 50 အထက်ဖြစ်ပြီး ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအများစုမှာ ကမ်ပူးချားနိုင်ငံသား 3000 ခန့်ဖြစ်သည်။ ထိုရက်များတွင် အလုပ်သမားများအေးဆေးစွာနားနေကြရင်း မိမိတို့ဖွင့်လှစ်ထားသော ဥပဒေ တရားရုံးလေး၌ လာရောက်ကာ အကြံဉာဏ်များယူခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းများရယူနိုင်ကြပါသည်။
တရားရုံးလေးစဖွင့်သောအချိန်တွင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများသည် ဒေသအာဏာပိုင်တို့ကိုကြောက်ရွံ့ သောကြောင့် လာရောက်ဆွေးနွေးခြင်းနည်းသည်။ သို့သော် တရားရုံးလေးမှာ လစဉ်ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ပြီး သက် ဆိုင်ရာရှေ့နေများ မကြာ ခဏလာရောက်ဆွေးနွေးမှုများပြုသောအခါ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအနေဖြင့် တဖြည်းဖြည်းယုံကြည်မှု၊ စိတ်ချမှုများတိုးလာကာ တရားရုံးငယ်၌ လာရောက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများလာ သည်။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအများဆုံး ရင်ဆိုင်ရသောအခက်အခဲများမှာ အလုပ်ရှင်များမှ လုပ်အားခ လိမ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ တချို့အလုပ်သမားများသည် မိမိတို့ အလုပ်ရှင်အမည်ရင်းကို မသိကြသည့်အပြင်၊ တချို့ အလုပ်ရှင်များသည် အခြားနေရာသို့ပြောင်းပြေးကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ရှေ့နေများသည် လာရောက် ဆွေးနွေအကြံတောင်းကြသော ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအား မှန်ကန်သောနည်းလမ်း၊ နည်းပညာ၊ အသိပညာများဖြင့် ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးကြသည်။
သတင်း (4) နမ္မခင်းကျေးရွာလူထုနှင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏စုပေါင်းဘုံကထိန်းပွဲ
ဖန်ငခရိုင်၊ တကွာပါမြို့နယ်၊ နမ္မခင်းကျေးရွာလူထု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် အဆင့်အတန်း နှင့် လူမျိုးခွဲခြား မှုမရှိပဲ အောက်တိုဘာလ 31 ရက်နေ့တွင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့်ပူးပေါင်းကာ ဘုံကထိန်းသင်္ဃန်းပူ ဇော်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဤဒေသသည် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ဘ၀ကိုကောင်းမွန်စွာနားလည်းပြီး လွတ်လပ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုများ ပေးကာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့် ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတူတကွပူး ပေါင်းလျက်ရှိသည်။
သတင်း (6) တရန်(င်)။ အာစီယံနိုင်ငံအဖွဲ့ဝင်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအရေး ပြင်ဆင်ခြင်း။
2555 ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ 1 ရက်နေ့တွင် အန်ဒါမန်လူမျိုးစုဆက်နွယ်မှုစီမံကိန်းအဖွဲ့နှင့် ရက်(က်)ထိုင်းဖောင် ဒေးရှင်းတို့ပူးပေါင်းကာ တရန်(င်)ခရိုင်၊ ကန်တန်မြို့နယ်၊ ခေါ်စိ(မ်)ဘီးအစည်းအဝေးခန်းမ၌ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရာ တရန်(င်)ခရိုင်မှူး နိုင်ထီရယု(တ်) အီယံတရဂုံ(န်)မှ အစိုးရ၀န်ထမ်းများအား တရန်(င်)ခရိုင်၏ မူဝါဒ နှင့် အာစီယံနိုင်ငံအဖွဲ့ဝင်များ ကြိုဆိုရန်ကိစ္စများ အပ်နှင်းခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအခန်းနား၌ ကန်တန်မြို့တော် ၀န် နိုင်ဝိစိ(တ်)တန်ပေါင်မှ ဥက္ကဌနေရာယူ၍ အခန်းအနားအဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါသည့်အပြင်၊ နိုင်စုရဖွန် ကောင်ကျန်ထု(က်) အထက်လွှတ်တော်အမတ်၊ နိုင်အဒိစွန် ကေ့(က်)မွန်ခွန် လူ့အခွင့်အရေးထူးချွန်ဆုရှင်၊ လီလဖိုင်ကျိ(တ်) အခန်းအနားမှူးအဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီးလျှင် တရန်(င်)ခရိုင်အလုပ်သမားဌာန နှင့် အလုပ်ရှာဖွေရေးဌာနတို့လည်း ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။ အခန်းအနား၏နောက်ဆုံးတွင် အစိုးရ၀န်ထမ်းများမှ ကြေငြာလိုက်သည်မှာ တရန်(င်)ခရိုင်အတွင်း အာစီယံစင်တာဖွင့်လှစ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အာစီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများအဖြစ် ပြင်ဆင်ရန်နှင့် တရန်(င်)ခရိုင်လူထုမှလည်း အာစီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏အရေးကြီးသော အချက်များအား ကောင်းမွန်စွာနားလည်ထားစေရန်၊ လူမှုရေးနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကို လည်း သိရှိနားလည်းထားစေရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ကိစ္စများသည်လည်း အရေးကြီးသောအချက်အလက်အဖြစ်သိရှိလေ့လာထားကြရန်ဖြစ်သည်။ တရန်(င်)ခရိုင်တွင် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများစွာရှိပြီး ထိုင်းလူမျိုးများအနေနှင့် မိမိတို့၏အပြုအမူများပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပြီး မိမိ တို့၏အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံသားရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအား တန်းတူညီတူဆက်ဆံရန်ဖြစ်သည်။ အနာဂတ် တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌စီးပွားရေးအခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီး၊ တရန်(င်)ခရိုင်၏ စီးပွားရေးအခြေ အနေမှာ အခက်အခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည့်အခါ၊ အလုပ်သမားပြတ်လတ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါ မိမိတို့ထိုင်းလူထုအတွက်အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအား တရားမျှတစွာပြုမူ ဆက်ဆံဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားရန် အာစီယံစင်တာ၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ အာစီယံစင်တာသည် 2558 ခုနှစ်မတိုင်မီဖွင့်လှစ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တရန်(င်)ခရိုင်ဝန်ကြီးအနေနဲ့လည်း မြန်မာအစိုးရဌာနများနှင့် လူထု များအားသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး တရန်(င်)ဒေသအတွင်းလုပ်ငန်းခွင်များလာရောက်လေ့လာရန်နှင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံရန်အကြောင်းကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
This entry was posted in Uncategorized on January 29, 2013 by andamanceia.
← “GLT 1/ GLT2နှင့် ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာ CBO များ တွေ့ဆုံပွဲ” SMC စာကြည့်တိုက်မှ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု သာသနာနှင့်ဆိုင်သောစုပေါင်းအလှူပြုလုပ်ခြင်း →
GLT Training with arjarn Pracha Hutanuwat on critical thinking issue.
Took photo with the trainer from the Thai research Foundation that learnt about how to research inacommunity.
GLT training in June 2013